Firefox ကို ၂ ဆပိုမြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...? ~ .
Firefox ကို ၂ ဆပိုမြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...?
(၄) network.http.proxy.pipelining အားထပ်ရှာပါ။ Double Click ပေးပါ။ တန်ဖိုးကို True ပြောင်းပါ။
(၅) filter Search Bar ထဲမှာ Network.dns.disableipv6 ကိုရှာဖွေပြီး Double Click ပေးခြင်းဖြင့် Value ကို True အဖြစ်ပြောင်းပါ။
(၆) content Interrupt Parsing
ဒီနည်းလမ်းကတော့ Firefox ကို အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ Application တစ်ခုခုကြောင့် Page Loading ရုတ်တစ်ရက်ရပ်တန့် ခြင်းကို တုန့်ပြန်မှုမှ ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမဆို Right Click (apple Mac User များ - Ctrl+click) ပေးပါ။ New မှတစ်ဆင့် Boolean ကို ရွေးပါ။ New >> Boolean Value Pop-up Window ထဲမှာ Content.interrupt.parsing ကိုတည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ New Boolean အတွက် Value ကို True ကိုရွေးပါ။ Ok ပေးပါ။
(၇) Page Loading လုပ်နေစဉ်အတွင်း ကြန့်ကြာမှုဖြစ်စေသည့် Redirecting လုပ်ခြင်းအား အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ တုံ့ပြန်မှု မဖြစ်စေရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
about:config Window အတွင်းမှာပဲ Right Click ထပ်ပေးပါ။ Pop-up Menu မှတဆင့် New ကိုရွေးပါ ၊ ထိုမှတဆင့် Integer ကိုရွေးပါ။ New Integer Pop Up Menu အတွင်း Content.max.tokenizing.time ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ Value ကို 2250000 ထည့်ပါ။ Ok လုပ်ပါ။
(၈) content Notify Interval
about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.notify.interval ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ value ကို 750000 <ပေးပါ။ Ok လုပ်ပါ။
(၉) content Notify Ontimer
မိမိအသုံးပြုပြီးသား စာမျက်နှာတစ်ခုကို ပြန်ခေါ်ရာမှာ စောင့်ဆိုင်းချိန်နည်းပြီး ပိုမိုသွက်လက်စွာအလုပ်လုပ်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Boolean ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.notify.ontimer ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ Value ကို True ရွေးပြီး Ok ပေးပါ။
(၁၀) notify Backoffcount
about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.notify.backoffcount ကိုရိုက်ပြီး Ok ပေးပါ။ Value ကို5ပေးပြီး Ok လုပ်ပါ။
(၁၁) content Switch Threshold
ဒါကတော့ ၀ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကနေ ဒေတာတွေကို အလွဲအပြောင်းလုပ်ရန်အတွက် ကြာမြင့်ချိန်ကို အနည်းဆုံးဖြစ် အောင်လျော့ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။ about:configwindow ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.switch.threshold ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok လုပ်ပါ။ value ကို 750000 ထည့်ပြီး Ok လုပ်ပါ။
(၁၂) nglayout Initialpaint Delay
Firefox နဲ့ ၀ဘ်စာမျက်နှာတွေဖွင့်တိုင်းမှာ မိမိလိုအပ်တဲ့ စာမျက်နှာမရောက်မှီ အမှန်တစ်ကယ် မလိုအပ်တဲ့ ဒေတာတွေ အများအပြား ကိုပါ Firefox က Download ချလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စောင့်ဆိုင်း ချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ထား နိုင်ပါတယ်။
about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Nglayout.initialpaint.delay ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Ok လုပ်ပါ။ Value ကို0ထားပါ။ Ok ပေးပါ။
စာရေးသူ - ကြေးစားလေး at 12:26 PM